चुनावी यात्रा अनुभव
नेपालगञ्ज | बैशाख १०, २०७९
कोहलपुरबाट नेपालगञ्ज बजार पुग्दै गर्दा जब ६ लेनको फराकिलो सडकमा आँखा पुग्छन्, धेरैलाई लाग्न सक्छ- वाह, यस्तो पो विकास ! १६ किलोमिटर कोहलपुर-नेपालगञ्ज यात्रा कुनै समृद्ध मुलुकको हाइवेभन्दा कम छैन ।
यो सडकको प्रशंसा गर्दा फरक पर्दैन । फरक यत्ति हो- विकसित मुलुकका त्यस्ता फराकिला सडकमा कडा र अनुशासित ट्राफिक नियम, आधुनिक सडकबत्ती, चिल्ला कार, लक्जरियस बस या ट्याक्सी देखिन्छन् । नेपालको यो सडक खण्डमा अटोरिक्सा, साइकल, मयुरी र टाँगाको भीडभाड एवं नेपाली समाजको गरीबीको तीतो यथार्थ भेटिन्छ ।
हिजो म करीब पाँच वर्षपछि कोहलपुरबाट नेपालगञ्ज बजार पुगेँ । यसबीचमा यात्रा गर्दा कोहलपुरबाट सीधै कैलाली या सुर्खेततिर मोडिएँ । यस पटक नेपालगञ्ज बजार र आसपासका क्षेत्रको भ्रमण गर्ने तालिका काठमाडौंमै तय भएको थियो । सन्दर्भ हो- स्थानीय चुनाव ।
जब तपाईं नेपालगञ्ज बजारबाट भित्री वस्तीहरूतिर लाग्नुहुन्छ, तब थाहा हुन्छ- के कुनै स्थान बडेमानका चौडा सडकले जोडिँदैमा त्यस वरपरका जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन आउँदो रहेछ ? यही प्रश्नले हो- लेखकलाई यो आलेखतर्फ डोर्‍याएको ।
के यो पाँच वर्षमा नेपालगञ्जका वस्ती र स्थानीयवासीको जीवनमा सार्थक परिवर्तन आएको छ ? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सफाइ, खानपिनजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा थोरै भए पनि सुधार आयो ?
कोहलपुरबाट नेपालगञ्ज पुग्दा ६ लेनको चौडा सडक देखेर तपाईंको मनमा पलाएको उत्साह, रोमाञ्चकता र उत्सुकता त्यतिबेला खरानी हुन्छ, जब तपाईं नेपालगञ्ज बजारसँगै जोडिएका वडा नं ३, ४, ९, १०, १३ र १४ वस्तीहरूमा पुग्नुहुन्छ, स्थानीयको जीवन नजिकबाट नियाल्नुहुन्छ र उनीहरूसँग गफिनुहुन्छ ।
यो तस्वीर नेपालगञ्ज उपमहानगरको बजार क्षेत्रसँगै जोडिएको वडा नं. ४ को गणेशपुरको एक वस्तीको हो । तस्वीर आफैं स्पष्ट छ । तस्वीरमा एकजना महिला आफ्नो कुनै सामान सफा गर्दै हुनुहुन्छ । सँगै सानो होटल छ । सडकको किनारामा फोहर पानीले बनेको सानो ताल ।
यो दृश्य गणेशपुरको मात्र होइन । तपाईं नेपालगञ्ज बजार मज्जाले घुम्नुस्, चाहे त्यो मूल बजार होस् या भित्री वस्तीहरू । जहाँ-जहाँ पुग्नुहुन्छ, सडकको छेउछाउमा रातै दृश्य देख्नुहुन्छ ।
नेपालगञ्जको मूल बजारका सडक र भित्री सडकमा पुग्दा जब मैले सडकका दुवै किनारामा रातै (अबिर पोखिएर पानीले पखालेको जस्तै) दृश्य देखेँ, मलाई लाग्यो- होली खेल्दाका दृश्य होला । तर, होली पर्व सकिएको एक महिना बितिसक्यो । अहँ, होली खेल्दा रंग पोखिएर दाग लागेको राताम्मे दृश्य त ती हुँदै होइनन् ।
त्यसो भए जता गयो उतै सडक कसरी राताम्मे देखिन्छन् ? कि सधैँ यस्तै हुन्छ यहाँ ? हो, यी नेपालगञ्जका स्थायी दृश्य हुन् । टन्न पान खाएर प्याच्च जहाँ पायो त्यहीँ थुक्नाले बनेका दृश्य हुन् तीँ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवलशमशेर राणाले यो पाँच वर्षमा पान खाएर जहाँ पायो त्यहीँ थुक्ने विकृति रोक्न किन प्रयास गरेनन् ? किन सकेनन् ? हामीले राणासँग कुराकानी गर्न पाएनौं । तर, यही प्रश्न स्थानीयसँग सोध्यौं ।
‘धवल राजाले धेरै गर्नु भएको छ । बाटाघाटा बनाउनु भएको छ । आफूले भत्ता लिनु भएन । जनताको सेवामा समय खर्चनु भएको छ,’ वडा नं. १३ का स्थानीय वासिन्दा अब्दुल गफुर खानले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँलाई दोष लगाउने ठाउँ छैन ।’
खान राप्रपाकै शुभचिन्तक परेछन् । उनले राणाको प्रशंसा गर्ने नै भए । खानसँग केहीबेर कुरा गरेपछि म फेरि केही भित्री वस्ती नियाल्नतिर लागेँ ।
यो तस्वीर हेर्नुहोस् । सडकमा फोहरको सानो थुप्रो । घरको पछाडि फोहोर पानी जमेको छ । पानीमाथि जिउँदा र मरेका बग्रेल्ती झिँगा । नेपालगञ्जको भित्री वस्तीमा तपाईं जहाँ पुग्नुहोस्, देख्ने यस्तै दृश्य हो ।
भित्री वस्तीहरूमा पुग्दा तपाईंको आँखा रसाउने अर्को दृश्य हो– झिँगैझिँगाले घेरेको खाना र त्यही खाना वरिपरि काम गर्दै गरेका स्थानीय ।
‘हामीले भोट दिएकाले जनताका काम गरेनन् । चामल बाँडेनन् । पैसा त वडामा आयो रे । असार मसान्तमा बजेट सके रे । यिनलाई भोट दिएर के भो ? मेरा एक लाख ६० रूपैयाँ पर्ने राँगा खोसेर खाइदिए । गल्ती थिएन तर मलाई बर्बाद बनाए,’ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ का हुसेन मोहम्मद राईले आक्रोशित हुँदै लोकान्तरसँग भने, ‘कोरोनाका बेला साबुन पानी पनि दिएनन् । यस्तालाई फेरि भोट हाल्नुपर्ने ?’
वैशाख महिनाको ४२ डिग्री घाममा आँट गरेर तपाईं नेपालगञ्ज बजारबाट १५ किलोमिटर भित्र पुग्नुस् र एक छिन स्थानीयसँग कुराकानी गर्नुस् त । अनि थाहा पाउनुहुन्छ– दर्दनाक कथा । यो लेखकसँग त्यस्तै दर्दनाक कथा सुनाउने मध्येका एक थिए– वडा नं. १४ का मोहम्मद हुसेन कबडिया ।
उनले गत वर्ष कोरोना भाइरसको समस्या उत्कर्षमा पुगेका बेलाको एउटा दुःखद् घटना सुनाए । उनको गाउँमा शौचालय रहेनछ । शौचालय बनाइदिनुपर्‍यो भनेर धेरै पटक वडामा अनुरोध गरेछन् ।
‘५० बिघा जमिन हुनेको घरमा शौचालय बन्यो हजुर, हाम्रोमा बनाइदिएनन् । गत वर्ष कोरोनाको समयमा बाहिर चौरमा दिसा गर्दै थिएँ, पुलिस आएर लखेट्यो । दिसा गर्दागर्दै भाग्नुपर्यो ।’ कबडियाको गाउँका धेरै स्थानीय वासिन्दाका घरमा अहिले पनि शौचालय छैनन् । बिहान–साँझ उनीहरू अहिले पनि खुला चौरमा शौच गर्छन् ।
बजारबाट थोरैमात्र दूरीमा रहेका भित्री वस्तीमा सडक राम्रै बनेको देखिन्छ । कतिपय सडक पिच (कालोपत्रे) भएका पनि छन् । तर, अलि भित्री वस्तीमा सडक पुगेकै रहेनछ ।
‘सडक नबनेका कारण एम्बुलेन्स पनि जाँदैनन् । बिरामी पर्दा आपत् आइलाग्छ,’ कबडियाले गुनासो गरे ।
दैलेखबाट झरेर यतै बसोबास गरेकी शान्ति श्रेष्ठ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १० मा बस्छिन् । घर छेउमै रहेको वडा नं. १३ मा पर्ने पीपलको छहारीमुनि चिया पसल चलाउँछिन् । बजारमा बढेको महँगीले उनको पारो तातेको रहेछ ।
मैले श्रेष्ठको चिया पसल छेउमा उभिएका केही स्थानीयसँग कुरा गर्दै थिएँ । वडा नं. १० आदर्शनगरका स्थानीय वासिन्दा गोपाल भण्डारी पसल छेउमै आइपुग्छन् ।
‘के हो आजकल पसलमा खासै सामान देखिँदैनन् । के भो ?’ भण्डारीको यो प्रश्न सकिन नपाउँदै श्रेष्ठ कड्किइन्, ‘यत्रो भाउ बढेको देखेका छैनौं ? कसरी किन्नु ? के म चोर्न जाउँ ?’ श्रेष्ठको जवाफले पीपलको बोटमुनि जम्मा भएर चिया पिइरहेकाहरूबीच एकछिन हाँसोको पर्रा छुट्यो ।
श्रेष्ठको जवाफ सुनेपछि उनै भण्डारीले भाउ बढ्नुको कारण देशका नेता र मौलाउँदो भ्रष्टाचार भएको तर्क गरे ।
‘भाउ बढाएको व्यापारी र उद्योगपतिले हो तर तिनलाई दोष दिएर काम छैन,’ भण्डारीले भने, ‘ती उद्योगीले नेतालाई चन्दा दिन्छन् । चन्दा दिएको रकम कहाँबाट कसरी असुल्ने भन्दा भाउ बढाउने । जनताको थाप्लोमा भाउ थोपर्छन् । हामी तिर्न बाध्य हुन्छौं ।’ कुनै पनि नेताले आफ्नो घरखेत बेचेर चुनाव नलडेको तर त्यस्तै उद्योगपति, व्यापारीसँग पैसा उठाएर चुनावमा लाग्ने खर्च जुटाएको आफूले देखेको भण्डारीले उल्लेख गरे ।
वडामा आउने बजेटमध्ये ५० प्रतिशत मात्र विकासको काममा खर्च भएको भण्डारीको दाबी छ । ‘बाँकी कहाँ गयो त ?’ जवाफमा भण्डारीले भने, ‘आफैं अनुमान लगाउनुस् ।’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चुनाव जितेर आएपछि तलब भत्ता लिन नपाउने कानून बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
मुलुकको प्रधानमन्त्रीसमेत जन्माइसकेको देशकै ठूलो मध्येको एक शहर नेपालगञ्ज र योसँग जोडिएका वस्तीभित्रका समस्या जहिले जहाँको तहीँ किन ? किन आएन गरीबीको जीवनमा सुधार ? मैले वडा नं. ८ का स्थायी वासिन्दा रहेका मुस्लिम मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक अत्तहर हुसेनलाई नेपालगञ्ज बजारभित्रको एउटा वस्तीमा भेटेँ र सोधेँ–‘तपाईं बस्नु भएको सडक पेटीको छेउमा हेुर्नस् त, राताम्मै छ । पान खाएर थुकेको । जताततै यस्तै देखेँ मैले । पाँच वर्ष अघि आउँदा पनि यस्तै थियो । अहिले पनि उस्तै । गाउँका जनताका पीडा पनि उस्तै रहेछन् । कारण के हो ? के भयो भने सुधार हुन्छ ?
उनले मैले औँल्याएका समस्यामा विमति जनाएनन् । ‘हेर्नुहोस्, राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए । यहाँ पूर्वाधारका केही काम नभएका होइनन् तर जनताको वास्तविक जीवनमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । मेयर, सांसद कसैले पनि जनतालाई राहत दिने प्याकेज ल्याउन सकेनन्,’ हुसेनले लोकान्तरसँग भने, ‘अबको चुनावमा भोट माग्न आउनेले जनताको हित कसरी गर्ने भन्ने एजेण्डा ल्याउनुपर्छ । रिक्सावाला, मजदुर, ठेलागाडावालाहरूलाई उकास्ने एजेण्डा ल्याउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका धेरै सवाल छन् । ती सवाललाई हल गर्ने प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । होइन भने अब यहाँ कोही टिक्नेवाला छैन ।’
मेरो दुईदिने बसाइको निष्कर्ष छ- नेपालगञ्ज बजारका भित्री गाउँ वस्तीका वासिन्दामा संघीयता लागू भएपछिका पाँच वर्षमा गर्व गर्न लायक कुनै सुधार आएको छैन ।
हामी घुमेको र स्थानीय भेटेको निर्वाचन क्षेत्र सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईको रहेछ । राई यतिबेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको टुंगो लगाउने काममा व्यस्त रहेको सूचना पाएपछि हामीले उनलाई भेट्ने प्रयास गरेनौं । हामीसँग कुराकानी हुन नसके पनि एक पटक यो स्टोरी पढ्ने फुर्सद राईजीले पाउनुहोला कि !
‘चुनाव जितेपछि सोझा नेता पनि फटाहा बनिगए’
नेपालगञ्जले खोजिरहेको धवलशमशेरको विकल्प, मनोनयनअगावै तातेको चुनावी मैदान
प्रधानमन्त्री देउवासँग अमेरिकी सांसदहरूले गरे शिष्टाचार भेट